Mahaiza mifidy | NewsMada
Par Taratra sur 06/11/2019
Raikitra ity ! Samy hanao izay ho afany ireo kandidà hilatsaka ben’ny Tanàna handresy lahatra ny mponin’Antananarivo. Hanao ny hazakazaka arahin-tosika izy ireo haka ilay lapan’ny Tanàna etsy Analakely.
Hitobaka eo anoloan’ny mponina ny fampanantenana sy ny toky rehetra. Hiezaka hambabo ny fon’Antananarivo avokoa izy ireo ao anatin’izao propagandy izao. Samy hivarotra ny tenany hilokaloka fa hanavotra an’Iarivo ao anatin’izao faharavana tanteraka izao.
An’ny vahoaka anefa ny fahefana hampindramina ireo olona hitondra eo. Ny vahoaka no hifidy sy hifantina iny mety aminy. Izy ireo no tompon’ity Antananarivo ka izy no hametraka izay lohany hitarika ny fitantanana eto.
Mahaiza mifidy ary! Mahaiza mifantina tsara. Tsy izay rehetra manome ny toky fitaka sy toky ankamorana no mety hahavita. Tsy ireo mahatolotolotra hanin-kely tsy hahavita taona no tena izy. Tandremo sao sodokan’ny endrika amam-bika ihany…
Manana ny fandaharanasany ireo kandidà ireo. Izay tena hahavita hanavotra ity Renivohitr’i Madagasikara latsaka anaty fahalovana tanteraka ity no tokony hotafapetraka eo. Olom-baovao, sahy, hentitra….
Misy ny kandidà efa hita taratra ny tanjany amin’ny fitantanany ny orinasany maro ary mahavita mampijoro izany ho sangany hatrany efa an-taona maro. Azo itarafana ny fahaiza-manaon’ilay kandidà izany ary azo amaritana ny traikefany amin’ny fahaiza-mitarika sy fahaiza-mitantana ihany koa. Olom-baovao kanefa manana ny toerany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Manana fifandraisana akaiky amin’ireo mpiara-miombon’antoka ka ho mora aminy foana ny hampandroso an’ity Antananarivontsika ity.
Andry iankinan’Antananarivo izy ary antenaina fa hahasintona an’Iarivo ao anatin’izao lavaka mangitsokitsoka sy fahalovana navelan’ny teo aloha izao.